Ciidamada Madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyeen degaano | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ciidamada Madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyeen degaano
Ciidamada Madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyeen degaano
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ilaalada Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta howlgal ka sameeyeen Deegano hoostaga Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Howlgalka oo uu qeyb ka ahaa Wasiirka Warfaafinta Koonfur Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur ayaa Ciidamada waxaa ay ka sameeyeen degaannada Ceeldoon, Yaaqle, Seydheelow, Ayrooble, Nibka saar, Maguurto iyo Caasha gaabo, halkaas oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidamada ilaalada Madaxtooyada Koonfur Galbeed Isaaq Cabdi Isaaq ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwo kalena Nolosha lagu qabtay kadib dagaal ka dhacay degaannada howlgalka laga sameeyay.
Waxaa uu ugu baaqay Shacabka kunool degaannada howlgalka laga sameeyay inay Ciidamada la Shaqeeyaan si ay uga guuleystaan Al-Shabaab.
Degaannada Maanta Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ilaalada Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay ahaayeen goobo ay Al-Shabaab kasoo abaabuli jireen weerarada ay ka geystaan Magaalada Baydhabo.
Ciidamada Madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyeen degaano was last modified: December 13th, 2021 by warsan radio
Xildhibaanno ka soo horjeestay go’aankii fadhiyada Baarlamaanka looga mamnuucay
Dhageyso:-ku celiska Barnaamijka Barshada nafaqada wanagsan iyo badqabka Cunada
Villa Somalia oo shaacisay goorta uu furmayo shirka Farmaajo, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe